Dankook University - Imfundo Ephakeme Kwamanye Amazwe e-South Korea
Dankook University Yokuxhumana
isifinyezo : DKU
Wasekelwa : 1947
Ungakhohlwa xoxa Dankook University
Bhalisa at Dankook University
Ngaphansi mottos owasungula “Insindiso National, Independence and Self Reliance,” kanye nezimiso eziqondisayo of “Truth and Service,” Dankook University uye wawufeza ngokwethembeka izabelo zalo of indlela yokuzilungisa ithalente abasha kanye nokwenza lula ukubhekwa okuthuthuka academic.
Ngo 1967, Dankook University wakhushulwa isimo enyuvesi. With ukwethulwa campus yesibili ngo Cheonan, DKU waba ngowokuqala phakathi emayunivesithi Korea ukuba abe campus igatsha. DKU uye waqhubeka ekukhuleni kwayo kuyamangalisa ne ukuvuleka esibhedlela yayo zamazinyo 1984 isibhedlela jikelele 1994.
Ngemva 60 iminyaka umlando ka oziqhenyayo Seoul, DKU wathuthela e campus yayo main ukuba Jukjeon e 2007, ngomzamo ukuze alungiselele uqobo for igxathu elikhulu eliya phambili kule nkathi global. Ngemva 30 iminyaka sokuhlanganiswa azinikele, siye agcwaliswe “An esiphelele Dictionary of Chinese Characters Asetshenziswa Korean” – ende futhi enemininingwane kakhulu hlobo. Ngaphezu kwalokho, emva yimpumelelo 2010 ukuvalelisa for Pharmaceutical College on campus Cheonan, siye wabeka isisekelo esiqinile onguchwepheshe ekuphileni sciences. I Cheonan campus LINC Project Group kukhethwe njengoba isizwe sika evelele kunazo, futhi liye okhiphela amaphrojekthi ahlukahlukene ngaphansi umgomo kokubekela indinganiso ukubambisana embonini-university. Khonamanjalo, campus Jukjeon uye wagxila ucwaningo yayo kanye nokutshalwa kwezimali ku-Information Technology (IT) Namasiko Technology (CT). With the Impumelelo yamuva emisebenzini kahulumeni, 'Intellectual Property Education Project’ futhi 'Ukulima Project Universities Isibuko-Oholela,’ campus Jukjeon ethatha eqa entsha phambili babe isikhungo for ukubambisana embonini-university and ibhizinisi uqalisa izinhlelo.
Sisanda baye baphetha kabusha okukhulu amakolishi ethu izinhlelo zokuphatha njengengxenye yemizamo yethu yokuqinisa ikusasa Dankook University njengoba omunye iyunivesithi emhlabeni-class. Ngaphezu kwalokho, sakha phezulu-of-the-line sevisi yesistimu ukuthi kwanelisa izidingo ikhasimende, ngokuxhaphaza abezindaba ezintsha kanye nokuqukethwe zemfundo, futhi uqinisekisa ucwaningo othe xaxa kanye nokuphatha. Ngokusekelwe kulezi okutholakele, DKU uye kuhlanganiswe esewonke yayo futhi umkhankaso Dual Campus System’ kusukela ngo 2014, egxile lunye.
Ngaphansi banner “Challenge futhi Creation,” the faculty kanye nabasebenzi Dankook University abazokwenza konke okusemandleni abo ukuze zokuthuthukisa ukuncintisana DKU futhi yokukhuphula isimo brand Dankook. Sicela bajabule Dankook sika “Challenge futhi Creation” njengoba senza eqa ukuze abe umholi kwenkathi entsha.
UMongameli Dankook University
Ifilosofi owasungula Dankook University - Salvation National, Independence nokuzethemba - evela izimiso zomuntu siqu lapho abasunguli zethu Mr. Beomjeong, Chang Hyong uNkosikazi. Hyedang, ngoba Huijae Kwase kutshalwa ngokwabo phakathi nezikhathi zeziyaluyalu emlandweni Korean. Babeye mathupha ukudabuka kokufelwa ezweni lakubo ngaphansi kokubusa Japanese futhi ekugcineni ayeqiniseka ukuthi ukuzibusa kwakungatholakala kuphela kufezwa ngokusebenzisa ukufundisa abantu abanamakhono futhi wokushisekela izwe. Abaqambi ezimbili baqaphela ukuthi abafundile kwadingeka ukuba isebenzise amakhono abo hhayi ngenxa yenzuzo siqu kodwa ngoba isizwe sisonke, eliqhutshwa umuzwa walokho esiyikho kazwelonke kanye zomlando / neqiniso social. Ngempela, bakukholelwa kwase kuwumsebenzi Dankook University ukuba aqeqeshe abantu abanjalo ukukhanyiselwa.
Ngaphezu okuphokophelwe enjalo, Dankook University ayinakekele ngesisa iqiniso futhi inkonzo izimiso zalo eziqondisayo. Kuyinkolelo yethu ukuthi injongo yocwaningo kanye nesifundo ilala okungaphezu kokumane ekuzuzeni amathuluzi KHO sustenance - ngenhloso oyinhloko zemfundo ephakeme iyona kwandzisa bolwazi lwabantu kanye namasiko. ngokuyinhloko, izazi anesibopho ukubuyela ulwazi olunjalo emphakathini kanye neqhaza intuthuko zomlando. Kumelwe sifune ukuthuthukisa ebukhali, izingqondo ezibucayi kanye uhlamvu zokuziphatha ezilungile; ngokwenza kanjalo futhi ngokuzithandela iqhaza kule ngcono umphakathi wonkana, omunye emelela endleleni Dankook efisa ezibekwe. Kuye kwaba ukuzinikela okungantengantengi wokufezekisa imisebenzi enjalo yemfundo ephakeme nokushisekela izwe okuye kwabangela ukuba ukhona Dankook University injalo zamanje.
College of Isayensi yomphakathi
College of Engineering, eKolishi Architecture
College of Science Cultural
College of Technology okuphezulu
College of Sekutivocavoca
Isisekelo Dankook University sivunyiwe ngoNovemba 1, 1947, wokuvula yayo ezenzeka ngesikhathi Nakwon-dong, Jongno-gu, Seoul, ngoNovemba 3 ngawo lowo nyaka.
Le nyuvesi wethulwa esekelwe ngeminikelo zezimali ngasekupheleni Hyedang, Cho Huijae kanye lowo owayenguSihlalo we-Park Jeongsook, kanye nefilosofi imfundo Beomjeong, Chang Hyong. Ngezinye isisekelo salo, eyunivesithi waba 960 abafundi, neminyango emibili Faculty of Law neminyango emithathu e-Faculty of Arts Liberal. UProfesa Chang Dobin sivulwe njengoba uMongameli wokuqala.
Uyafuna xoxa Dankook University ? Noma yimuphi umbuzo, imibono noma ukubuyekezwa
Dankook University kumephu
Izithombe: Dankook University Facebook ezisemthethweni
Izibuyekezo Dankook University
Joyina ukuxoxa ka Dankook University.